MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA: 20 March 2011
The Reality of Myanmar National League(MNL) is To Make People Weak? - Article 3
"MNL ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများဖြင့် ပြည်သူတွေကိုသွေးခွဲနေပြီလော၊ အာရုံပြောင်းနေပြီလော၊ လှည့်ဖြားရိုက်စားနေပြီလော" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပါ။
ဒီတစ်ခါရေးချင်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ ကနေ့ မြန်မာပြည်က အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကာ ကျင်းပနေတဲ့ AFC Challange Cup 2011 အတွက် ခြေစစ်ပွဲများမှာ မြန်မာအသင်းဟာ ဖိလစ်ပိုင်ကို ၁း၁ ဂိုးနဲ့ သရေကျ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ၂းဝ ဂိုးနဲ့ ရှုံး၊ ယနေ့(၂၀၁၁၊ မတ်၊ ၂၅) - ပါလက်စတိုင်းကို ၃း၁ ဂိုးနဲ့ ထပ်ရှုံးပြီး ခြေစစ်ပွဲမအောင်တဲ့အပြင် အသင်းအတွင်း၊ အသင်းနဲ့ ပရိသတ်အကြား စည်းလုံးချစ်ခင်မှုတွေ ပိုမိုပြိုကွဲလာခဲ့ရတာကြောင့်ပါပဲ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁၊ မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့က Goal Project အစီအစဉ်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာရောက်မဲဆွယ်သွားတဲ့ ကမ္ဘာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဆပ်ဘလတ္တာဟာ မြန်မာ့ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဌ ဇော်ဇော်နဲ့ အတိုင်အဖောက်ညှိကာ(ဇော်ဇော်နဲ့ ဘာတွေအပေးအယူလုပ်ထားသလဲမသိ) -
"MFF ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးဇော်ဇော်၏ ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခွင့်ရခဲ့သည့် အတွက် ၀မ်းသာပီတိ ဖြစ်ရပါကြောင်း၊ ဂိုးပရောဂျက် အစီအစဉ်များဖြင့် အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့သော အဆောက်အဦ၊ ဘောလုံးအကယ်ဒမီ အပါအ၀င် လူငယ်မျိုးဆက်သစ် ကစားသမားများကို အနာဂတ်အတွက် ပြုစုပျိုးထောင် လေ့ကျင့်ပေးနေမှုများမှာ ကျေနပ် အားရစရာကောင်းကြောင်း၊ တည်ဆောက်ဆဲ အားကစားကွင်းများမှာလည်း အလွန်ပင် အားရစရာ ကောင်းကြောင်းနှင့် အနာဂတ် မြန်မာဘောလုံး လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများ ဖြစ်ကြောင်း၊ MFF ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်သည် မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ဟု ခေါ်သည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ် ပြိုင်ပွဲကို ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်မှုမှာ အလွန်ပင် ကောင်းမွန်သည့် လုပ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း"... မြှောက်ပင့်ပြောဆို အသံကောင်းဟစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် ဖီဖာဥက္ကဌရာထူးအတွက် မဲဆွယ်ကာ ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဖီဖာဥက္ကဌဆပ်ဘလတ္တာရေ... တကယ်အဟုတ်ကို အားရကျေနပ်စရာကောင်းလှတဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးအလားအလာပေပဲဗျာ။
"ခေတ်ပျက်မှာ သူဌေးလုပ်ရတာ လွယ်သကိုးဗျ"... ဇော်ဇော်၊ တေဇ၊ အောင်ကိုဝင်း၊ ဌေးမြင့်၊ လွင်မိုး အစရှိတဲ့ အာဏာရှင်နောက်မြီးဆွဲများ(သို့မဟုတ်) အာဏာရှင်များရဲ့ ဒိုးတူပေါင်ဖက်စီးပွားဖက် သူဌေးဆိုသူတွေကတော့ ဒီလိုပဲတွေးနေ၊ ပြောနေကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ ခုခေတ်မှာ သူဌေးဖြစ်နည်းဖော်မြူလာကား "သာ+ပေါင်း-ညာ×စား" ပင်ဖြစ်သတည်း... လို့ဆိုရမလိုပါပဲ။ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေး(ဇာဂနာတို့ရဲ့ သူတောင်းစားညီလာခံ ကဇာတ်ထဲကလို ပြောရရင်) ချီးပွားရေးစနစ်နဲ့ အုပ်စီးနေကြတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ အင်အားဟာ မြန်မာပြည်မယ် ပိုမိုကြီးထွားလာနေပါပြီ။ "ဘယ်သူသေသေ- ငတေ၊ ငရွှေ၊ ငဇော်၊ ငမိုးမာ" ပြီးရောသမားတွေပေါ့ဗျာ။
ခုမြန်မာ့ဘောလုံးအသင်းကို လူငယ်တွေနဲ့ သွေးသစ်လောင်းတော့မယ်ဆိုပြီး လေသံပစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာရှင်သမားများ၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်စီးပွားရေးသမားတွေအောက်မှာ ဒီလူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုရော ဘယ်လို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဦးမှာလဲ။ "လူငယ်တွေ ... မင်းတို့လည်း လူလည်ကျတတ်အောင် သင်ကြဦး"... ဆိုပြီး စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးကြမှာလား။
မြန်မာ့ဘော တိုးတက်ဖို့ ဘယ်လောက်ထပ်စောင့်ဆိုင်းရဦးမှာပါလဲ။ ချီးပွားရေးအကြံနဲ့ ဘောဗန်းပြတဲ့ ဇော်ဇော်၊ တေဇတို့ လူလည်မသားတစ်သိုက်ခြယ်လှယ်နေသ၍၊ အာဏာရှင်များရဲ့ ကိုယ်ကျိုးရှာအုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ မြန်မာပြည်နေနေရသ၍ မြန်မာ့ဘောလည်း တိုးတက်လာဖို့ လမ်းမမြင်လှပါ။ ဘောလုံးလောကကိုတိုးတက်စေချင်ရင် ဘောလုံးကို တကယ်ချစ်သော၊ အားကစားကို တကယ်မြတ်နိုးသော အစိုးရ၊ ဘောအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ စစ်အင်အားအသုံးစရိတ်ကိုပဲ တိုးချဲ့ပြီး ချီးပွားရေးလက်ဝါးကြီးအုပ်သမားတွေနဲ့ ဒိုးတူပေါင်ဖက် ပူးပေါင်းလူလည်ကျနေတဲ့ အာဏာရှင်များ တည်မြဲနေသ၍ မြန်မာ့ဘောလုံးတိုးတက်လာဖို့ဆိုသည်မှာ "အိပ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်" တဲ့ စကားပုံထက်ဆိုးစွာ "စိတ်အပေါက်တွေနဲ့ အယားဖျောက်" သလိုသာ ဖြစ်နေမယ့်အကြောင်း စာပန်းဆင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ ။
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 26.3.110COMMENTS
Labels: MY WRITINGS, SPORT
Pan Hlaing Soe (Kyone Pyaw)'s Poem for Feminized Than Shwe
The YATI ရတီ စာပေအနုပညာ မဂ္ဂဇင်း Vol. 8, No.84, March, 2001 မှ ကဗျာဆရာ ပန်းလှိုင်စိုး (ကျုံပျော်) ၏ " ဖတ်ပြီးသားကို ထပ်ဖတ်ခြင်း " ကဗျာအား ဆက်စပ်ခံစားနိုင်ရန် မျှဝေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (ပူးတွဲပါပုံ)
Posted by Nyo Gyi, Don Nyo Gyi, Original Nyo Gyi at 20.3.110COMMENTS
Labels: OTHERS' POEMS, PHOTOS, SATIRE
Pan Hlaing Soe (Kyone Pyaw)'s Poem for Feminized T...
The Reality of Myanmar National League(MNL) is To ...